Tena An-koditra Ny Fiovàn’ny Toetrandro Ao Kenya, Manjo Olona An-tapitrisa Ny Haintany Sy Ny Mosary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Febroary 2016 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, नेपाली, 繁體中文, 简体中文, Français, English
Teresina (45 taona) miasa ny taniny nandritry ny haintany tao Tharaka Nithi, Kenya, Oktobra 2015. Sary an'i Trocaire, mpampiasa Flickr. CC BY 2.0
Ao anatin'ity andiany ahitàna fizarana roa ity, mizara ny tolona ataon-dry zareo sy ny fanantenany ireo feo tanora avy ao Kenya, raha narahan'ny orambatravatra tsy mahazatra ilay haintany nandravarava ny Tandrok'i Afrika, ao anaty tontolo iray izay mafàna kokoa noho izay fotoana rehetra voasoratry ny tantara.
Ireo fijoroana vavolombelona ato anatin'ity andiany ity dia nangonin‘ny “Climate Impacts Program” ao amin'ny 350.org, fikambanana iray manangana hetsika momba ny toetrandro manerana izao tontolo izao ary averina avoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna vontoaty.
Ny ampahany faharoa dia nosoratan'i Unelker Maoga, mpianatra iray mandalina ny fiarovana tontolo iainana. Ato vakiana ny ampahany voalohany.
Nandritry ny taompolo vitsivitsy farany, naniry fiovàna izahay Keniana, fiovàna amin'ny fomba fanaon'ny governemanta, fiovàna tetikadim-pampandrosoana, fovàna amin'ireo olan'ny firenena. Ankehitriny ny firenenay dia miaina kazarana fiovàna iray hafa, ao anatin'ny fotoana fohy. Mahery setra, fiovàna tsy nampoizina ; fiovàna tsy noeritreretinay akory : ny fiovàn'ny toetrandro.
Amin'izao fotoana izao, izaho sy ireo keniana marobe dia lasa zatra mahita lohateny goavana anaty gazety mivaky hoe: ‘Hanoanana Namoizana Aina 14 ’; Nanambara hamehana ny governoran'i Samburu satria 60% amin'ireo mponina ao an-toerana no miatrika tsy fanjarian-tsakafo. Toy izao no tena teny nambarany : ‘Tsy hivoaka velona amin'ity haintany ity isika’.
Unelker Maoga mizara ny fitantaràny manokana ny dona maharary ateraky ny haintany ao Kenya. Sary: Unelker Maoga
Voalohany teo amin'ny tantaran'ny faritra atsimon'ny Renirano Voi , ao amin'ny Faripiadidian'i Voi, no nisy ny haintany. Tsy vitan'ireo mponina intsony ny manondraka ny zaridainany, ka na ny fanantenana hahita sakafo aza izao efa mila tsy hisy. Nalefa ny antso ho an'ny governemanta nasionaly mba hiatrehana ilay toedraharaha. Mandritra izany fotoana izany, mioty fatiantoka ireo tantsaha ary mitazana ny biby fiompiny miala aina ny mpiompy.
Lehibe tao Kisii County aho, any amin'ny faritra andrefan'i Kenya. Mandray anjara betsaka amin'ny famatsiana voankazo an'i Kenya io faritra io, saingy nahamarika ny tsy fisian'ny rotsakorana ihany koa izahay. Tany amin'ny taona 1970 tany ny fianakaviako dia nanorina tohodrano iray teo afovoan'ny tanin'ny dadabeko. Teo foana ilay tohodrano hatramin'ny nahatsiarovako saina, saingy tato anatin'ny taona roa farany, nasehon'ireo olan'ny toetrandro nanerana ny firenena ho hitan'ny fianakaviako fa tsy fanomezana maimaimpoana akory io fitoeran-drano io. Satria iainanay ny andiany faharoa amin'ny haintany, dia mbola mitoetra ho tsy azo antoka ny ampitso.
Voatery miverina mandinika ny momba ny ranony i Kenya, ho toy ny zavatra sarobidy fa tsy hoe filàna fototra fotsiny. Ny tena mahatahotra indrindra ho ahy sy ireo hafa mpiray firenena dia ny tsy fahafahanay mamaha ilay toedraharaha. Raha hitarina, tsy eo ampelan-tànanany ny hery ho entina manalefaka ny fiovàn'ny toetrandro.
Mandany betsaka amin'ny androny amin'ny fiahiana momba ny rano ireo mponina rehetra ao Ajawa, avaratr'i Kenya, fa tsy mifantoka intsony amin'ny olan'ny fampandrosoana. Toa tsy misy zavatra hafa raharahaina intsony ankoatra ilay “tena filàna fototra” antsointsika hoe rano. Mandritry ny ora sy kilaometatra maro hatrany amin'ny farany, mandeha mamonjy ny lavadrano akaiky azy indrindra ireo mpikambana amin'ilay vondrom-piarahamonina, avy eo midina any amin'ny 30 metatra ao anatin'ny lavadrano iray toy ny zohy mba haka rano ho an'ny biby fiompiny, alohan'ny hakàna aina amin'ny misandratr'andro. Io lavadrano io no toa hany loharano hitazonana aina. Ny sasany misafidy ny hipetraka lavitry ny lavadrano, taorian'ny namelezan'ireo bibidia azy ireo rehefa niezaka ny hankeny. Nisy ihany koa ny tranga fahafahanjaza nanjo ny vehivavy noho ny elanelan-tany lavitra be voatery nizoran-dry zareo mba handeha hantsàka rano.
Ren'ny governemantan'ny fari-piadidiantsika, indrindra fa ao Wajir, ny kiak'ireo mpiompy ary namatsy vola ireo biraon'ny mpitsabo biby mba hanampiana azy ireny hikarakara ireo biby fiompy anjatony, ho fampihenana ny fahafatesana aterak'ilay haintany. Na manampy aza, toa mbola kely loatra sy tara loatra ireny fepetra ireny, satria mbola mitohy manendy ny ampahany betsaka amin'i Kenya ny masoandro.
Isantaona, noho ny haintany dia very 14 lavitrisa Shillings Keniàna ny toekarena ; 3 % amin'ny harinkarena faobeny no very tamin'ny 2015 fotsiny. Olona maherin'ny 10 tapitrisa no mizaka ny fiantraikan'ny hanoanana ary vao mainka miharatsy ny toedraharaha, aina an'arivony maro no nafoy ary mbola an-dalana ny fikarohana vahaolana. An-tapitrisa ireo avy any amin'ny Tandrok'i Afrika no mandeha mifindra mankany atsimo, mizotra mankany amin'ny firenenay mba handositra ilay hanoanana henjana, nefa na izahay koa aza mba miaina toedraharaha tsy misy hafa amin'io andosiran-dry zareo io.
Koa satria mandifotra antsika ny zavamisy ateraky ny fiovàn'ny toetrandro, narahantsika ny Kaonferansa faha-21 niarahan'ireo mpisehatra rehetra natao tao Parisy, tamin'ny fanantenana fa hitondra fiovàna ireo fifampidinihana natao. Rentsika ireo mpitarika manerantany niarahaba ilay fanapahankevitra niraisana nataon'ireo firenena 195 mba hampihenana ny fandefasana entona manerana ny tany, tsy ho fisorohana fotsiny ny fiakarana 2°C amin'ny maripàna, fa fidirana amin'ny fifehezana azy io ho 1.5°C . Na vao manomboka aza isika, sahintsika ny manantena fa io làlana io no hany mitondra, indray andro any, ho amin'ny fampitsaharana ny fandoroana solika azo avy amin-javatra lò.
Ary efa manohy ny diantsika ihany isika eto amin'ny Tandrok'i Afrika mba hikarohana riandrano sy iandrandràna lanitra efa niandrasana orana hatry ny ela, ny fitarainanay dia ny hoe tsy ho adino ireo teny nataon'i Ban Ki-Moon, Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana :
… tonga izao ny fotoana hanekena fa voavaha amin'ny fiarahana miasa hitady ny tombontsoan'izao tontolo izao sy anaty firaisankina ny tombontsoan'ny firenena tsirairay. Mandefa hafatra maika ny natiora, matahotra tsy mbola nisy toy izany ny olona sy ny firenena maro… Ilaintsika ny miaro ny tany izay manohana antsika, ka mba hanaovana izany dia mila ny fifanomezan-tànantsika rehetra.